ဥမင် တူးဖော်မည့် မြေအမျိုးအစားပေါ် မူတည်၍ Rotating cutting wheel ပုံစံများ၊ ဥမင်မျက်နှာပြင်မှ ကျရောက်လာမည့် မြေဖိအားဒဏ်ကို ပြန်လည် တွန်းခံသည့် နည်းပညာများ၊ စက်ကို ထိန်းချုပ်မည့် အခန်း (Chamber) နှင့် ၊ တူးဖော်ပြီး မြေစာများကို သယ်ထုတ်သော စနစ်များသည်လည်း ပုံစံ အမျိုးမျိုး ကွဲပြား ခြားနားသည်။ ထို့ကြောင့် TBM များသည်လည်း အသုံးပြုမည့် မြေအမျိုးအစားအလိုက် အမျိုးမျိုးရှိသည်။
Liquid-supported mix-shield ကို အဓိကအားဖြင့် မြေပျော့များ၊ မြေပွများနှင့် သဲဆန်သော၊ ရွှံ့ဆန်သော မြေများတွင် အသုံးပြုပါသည်။ ထို TBM တည်ဆောက်ထားပုံမှာ စက်ဦးခေါင်းပိုင်းတွင် Cutting wheel ခေါ် မြေကြီးများကို တူးထုတ် မည့်စက် ပါရှိသည်။ ၎င်းစက်နောက်ပိုင်းတွင် Excavation chamber နှင့် Stone crusher များပါရှိသည်။ Excavation chamber ဆိုသည်မှာ Cutting wheel နှင့် Diaphragm wall ကြားရှိ အခန်းငယ် ဖြစ်သည်။ ၎င်းအခန်းထဲ Bentonite ဖျော်ရည်ကို ထည့်သွင်းထားပြီး ဥမင်မျက်နှာပြင်မှ ကျရောက်လာမည့် မြေဖိအားကို ၎င်း Bentonite ဖျော်ရည်ဖြင့် ပြန်လည်တွန်းကန်ထားကာ ဥမင်မျက်နှာပြင်၏ stability ကို ထိန်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
Stone crusher ဆိုသည်မှာ ဥမင် တူးဖော်ရာ၌ ပါရှိလာမည့် ကျောက်တုံး၊ ကျောက်ခဲကြီးများကို သယ်ဆောင်ရာ၌ လွယ်ကူမှုရှိစေရန် ခွဲချေပေးသော စက်ပစ္စည်း ဖြစ်သည်။
၎င်းတို့၏ နောက်တွင် Bentonite ဖျော်ရည်များကို ပို့ဆောင်ပေးမည့် ပိုက်လိုင်းများနှင့် တူးဖော်ရရှိသော မြေစာဖျော်ရည်များကို ပြန်လည် သယ်ဆောင်မည့် ပိုက်လိုင်းများ တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့အပြင် Excavation chamber အတွင်း လေဖိအား ပို့ဆောင်ရန် ပိုက်လိုင်းများနှင့် Compressor များ တပ်ဆင်ထားသည်။ ထို့နောက် TBM ရွေ့လျားရာတွင် အသုံပြုသည့် hydraulic jack များနှင့် Concrete lining, Steel lining များ တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် Erector ပါရှိသည်။ Working chamber အတွင်း၌ လေဝင်လေထွက် Ventilation အတွက် ပိုက်လိုင်းများ တပ်ဆင်ထားသည်။
EPB (Earth Pressure Balanced) shield
EPB (Earth Pressure Balanced) shield ကို အဓိကအားဖြင့် စိုထိုင်းဆများသော ရွံ့မြေများ၊ ယှေလှကျောက်များနှင့် သဲပါဝင်မှု နည်းသော မြေများတွင် အသုံးပြုသည်။ ၎င်း TBM တွင် Cutting wheel, Excavation chamber, Screw conveyor, Belt conveyor, Diaphragm wall, Compress air lock, Concrete lining, Steel lining များ တပ်ဆင်ရာတွင် အသုံးပြုမည့် Erector ၊ မြေစာများကို သယ်ဆောင်သော ရထားတွဲငယ်များနှင့် Ventilation ပိုက်လိုင်းများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။
ဤ TBM၏ ထူးခြားချက်မှာ ဥမင်မျက်နှာပြင်မှာ ကျရောက်လာမည့် ဖိအားများကို ထိုမြေစာများ၏ ဖိအားဖြင့် ပြန်လည် တွန်းကန်သော နည်းပညာကို အသုံးပြု ထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ၎င်းမြေစာများနှင့် ထိန်းညှိရာတွင် မြေသားသက်သက်ဖြင့် ထိန်းညှိသော နည်း၊ မြေသားထဲသို့ Clay paste ရောနှောထည့်သွင်းပြီး ဥမင်မျက်နှာပြင်၏ stability ကိုထိန်းသောနည်းနှင့် scum paste တစ်ခုခု ရောနှောထည့်သွင်းရသော နည်းဟူ၍ ၃ မျိုးထပ်ခွဲခြားနိုင်သည်။
TBM Glossary: New Generation of Metropolitan Archived5March 2016 at the Wayback Machine.
Lining Segments for Tunnel Construction with TBM: New Generation of Metropolitan Archived 14 March 2008 at the Wayback Machine.
မော်ကွန်းတင်ပြီးမိတ္တူ။ 16 December 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 22 August 2009 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။